Baby – Page5– Healthy Life Journal
ကလေးမှာ မွေးရာပါ ခြေထောက်ခွင်နေသလား . .
Q. ကျွန်မကလေးမွေးလာတုန်းကတော့ သတိမထားမိပေမယ့် ခြေထောက်ခွင်နေသလို ဖြစ်သလားထင်မိတယ်။ မွေးရာပါ ခြေထောက်ခွင်တာကို ဘယ်အချိန်မှာ သိရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ မကုဘဲထားမိရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ရောဂါကိုသိရတဲ့ အချိန်ကတော့ ကလေးငယ်ဟာ မွေးမွေးချင်း...
သံလိုက်ငယ်လေးများကို မျိုချမိပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရသည့် ၆နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
ကိုထက် အသက်ခြောက်နှစ်အရွယ် အဗီဆန်းဟာ ဟောလိုးဝင်းပွဲတော်မှာဝတ်ဆင်ဖို့ တစ်လလုံးစိတ်အားထက်သန် နေခဲ့ပေမယ့် တကယ့်ဟောလိုးဝင်းပွဲတော်နေ့မှာတော့ ဗိုက်နာပြီး နေလို့မကောင်းလို့ ဘယ်မှမသွားခဲ့လိုက်ရပါဘူး။ အဗီဆန်းရဲ့မိဘတွေက မသန့်တဲ့အစားအစာစားမိလို့ ဗိုက်အောင့်တယ်ဆိုပြီး ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဗီဆန်းဟာ သုံးရက်ဆက်တိုက်အန်ပြီး ဝမ်းဗိုက်အလွန်နာကျင်လာတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ...
ကိုယ်တစ်ခြမ်းမလှုပ်ရှားနိုင်ဘဲ မွေးဖွားလာသော်လည်း ခရစ္စမတ်နေ့တွင် စတင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည့် သမီးလေး
၊ လရိပ်မေ ၊ အေမီဟာ အသက်တစ်နှစ် မွေးနေ့အထိတောင်နေနိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး၊ တကယ်လို့ အသက်ရှင်ခဲ့ရင်လည်း သူခံစားနေရတဲ့ နာတာရှည် အာရုံကြောရောင်ရမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါ (CIDP)ကြောင့် လှုပ်ရှားမှုလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက အေမီရဲ့မိသားစုကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အေမီက အအေးမိဝေဒနာဖြစ်ရင် ဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ဖို့ အားနည်းလွန်းတဲ့အတွက်...
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ် အမျိုးသမီးတွေက အပူအစပ်အစာကို စားသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ မိခင်တွေက အပူအစပ်စာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မိခင်အပူအစပ်စားရင် မွေးကင်းစကလေးမှာ လေထတာနဲ့ ကသိကအောက်ဖြစ်တာတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက် ရှိနေကြလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အရသာက ကလေးတွေအပေါ်...